[ ] Raha nanohitra ny fanandraman'ny fanoherana ara-pihetseham-po, Kleinsman and Buckley (2015) :
"Na dia marina aza fa mety ho sarotra ny fisainana amin'ny fanandramana Facebook ary na dia tsaraina amin'ny valiny aza ny vokatra, dia misy fitsipika manan-danja izay tsy maintsy atrehina. Toy izany koa fa mangalatra ny mangalatra na manao ahoana na manao ahoana ny vola miditra, noho izany dia manana zo isika tsy hanandrana fanandramana raha tsy misy ny fahalalantsika sy ny fanekenareo, na inona na inona ny karazana fikarohana. "
Iza amin'ireto fehezanteny roa etika resahina ato amin'ity fizarana -pitolosaina ity na ny deontology - moa ve io fifamatorana io no tena mifandray akaiky indrindra?
Eritrereto hoe te hanohitra an'io toerana io ianao. Ahoana no fomba hanohananao ny tranga amin'ny mpanao gazety ho an'ny New York Times ?
Ahoana, raha ny marina, mety ho hafa ve ny hevitrao raha miresaka an'io amin'ny mpiara-miasa aminao ianao?
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) no mametraka ny fanontaniana raha tokony hampiasa bitsika nofaritana ny mpikaroka. Vakio ny taratasiny mba hianarana momba ny fototra.
Diniho ity fanapahan-kevitra ity avy amin'ny fomba fijerin'ny deontolojika.
Diniho ny fanapaha-kevitra mitovy amin'izany avy amin'ny fomba fijery manaraka.
Inona no hitanao fa mandresy lahatra kokoa amin'ity tranga ity?
[ ] Ao amin'ny lahatsoratra momba ny ethique momba ny fanandramana eo amin'ny sehatra, Humphreys (2015) nanolotra ity fanandramana ara-pitsipi-pihetseham-po ity hanasongadinana ireo fanamby ara-ethika entin'ny dinidinika izay atao tsy ankatoavin'ny antoko rehetra miantraika ary manimba ny sasany ary manampy ny hafa.
"Lazao ny mpikaroka iray mifandray amin'ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina izay te-hamantatra raha mametraka ny jiro eny an-jaridaina eny an-tsena dia hampihena ny heloka bevava mahery vaika. Ao anatin'ity fikarohana ity, ireo olo-meloka dia ireo mpanao heloka bevava: mety hanohintohina ny fikarohana ny fanekena ny fanomezan-dàlana an-kitsirano ho an'ireo mpanao heloka bevava ary mety tsy ho tonga mihitsy izany (fandikana ny fanajàna olona); Ireo mpanao heloka bevava dia mety hitondra ny vola lany amin'ny fikarohana nefa tsy mahasoa (fandikana ny fahamarinana); ary tsy hisy ny tsy fitovian-kevitra momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fikarohana - raha mahomby, ireo olon-dratsy manokana dia tsy hanome lanjany azy (mametraka olana amin'ny fanombantombanana ny hatsaram-panahy) ... Ny olana manokana dia tsy momba ireo lohahevitra ihany anefa. Eto dia misy ihany koa ny loza mety hitranga amin'ny tsy dia ifampiresahana, raha toa ny mpanao heloka bevava hamaly faty ireo orinasa mametraka ny jiro. Ny fikambanana dia mety mahatsapa tsara ireo loza ireo fa vonona ny hitondra azy ireo satria diso ny finoany ireo fanantenana tsy voavaly amin'ny mpikaroka avy amin'ny anjerimanontolo manankarena izay manentana azy ireo amin'ny ampahany. "
Manorata mailaka amin'ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina, izay manolotra ny fanombanana ara-moraly ny fanandramana araka ny tokony ho izy? Afaka manampy azy ireo hanao ilay traikefa araka izay itakiana azy ve ianao? Inona no mety ho fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao?
Misy fiovana sasantsasany izay mety hanatsara ny fanombantombanana ny etik'ity nofinofy fanandramana ity.
[ ] Tamin'ny taona 1970 dia nisy lehilahy 60 nandray anjara tamin'ny fanandramana an-tsekoly izay natao tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny tao amin'ny oniversite iray tany amin'ny faritra atsimoandrefan'i Etazonia (ireo mpikaroka tsy miantso ny oniversite) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Ny mpikaroka dia liana amin'ny hoe ahoana ny fihetsiky ny olona amin'ny fanitsakitsahana ny sehatra manokana azy, izay ny Sommer (1969) namaritra ny "faritra misy fetra tsy hita maso manodidina ny vatan'ny olona izay tsy ahatongavan'ny mpanafika." Ny mpikaroka dia nanapa-kevitra ny hianatra Ny fanondrahana ny lehilahy dia voakasika tamin'ny fisian'ny olona teo akaiky teo. Nanao fanandramana ny mpikaroka, rehefa avy nanao fikarohana momba ny fandinihana. Ny mpandray anjara dia voatery nampiasa ny rindrina havia havia ao amin'ny efitra fatoriana telo-amina (ny mpikaroka dia tsy manazava mazava ny fomba nanaovana izany). Avy eo, voatendry ho amin'ny iray amin'ireo dingana telo amin'ny fifandraisan'ny samy hafa ny mpandray anjara. Ho an'ny lehilahy sasany, ny mpiray ombalahy iray dia nampiasa ambaratonga teo akaikiny; Ho an'ny olona sasany, ny mpiray ombalahy iray dia nampiasa ny faritry ny lavaka tsy misy azy; Ary ho an'ny lehilahy sasany, tsy misy mpiray tsikombakomba niditra tao amin'ny efitra fandroana. Ireo mpikaroka dia nandanjalanja ny fari-piainany farany - ny fotoana maharitra sy ny fikirizana - amin'ny fandefasana mpikaroka momba ny fikarohana ao amin'ny toeram-ponenan'ny trano fidiovana akaikin'ny reniranon'ireo mpandray anjara. Toy izao no namaran'ireo mpikaroka ny fizotry ny famaritana:
"Nisy mpanara-maso iray nijanona teo amin'ny toeram-pisakafoanana tao amin'ny toeram-pivoahana teo akaikin'ny loha-hevitra. Nandritra ny fanandramana pilotan'ireo fomba ireo, dia nanjary mazava tsara fa tsy azo ampiasaina ny fehezam-pihaino heno mba hanombohana ny fanombohana sy ny fampitsaharana ny fantson-drano [urine]. Ilay mpandinika dia nampiasa prisma periscopic tafiditra ao anaty rakitsoratra misy boky miorina eo amin'ny gorodon'ny trano fidiovana. Ny efitra iray 11-inch (28-cm) eo anelanelan'ny tany sy ny rindrin'ny toeram-ponenan'ny trano fidiovana dia nampisongadina azy, tamin'ny alalan'ny periscope, ny tora-bolana ambany indrindra teo amin'ny mpampiasa ary nahatonga ny fahitana mivantana avy amin'ny renirano. Tsy nahita ny tarehin'ny sainy anefa ilay mpandinika. Nanomboka indroa fiambenana ny mpandinika rehefa nisy loha-hevitra nipoitra tamin'ny urine, najanona ny iray raha vao nanomboka ny urine, ary najanony ny iray rehefa tapitra ny fanadiovana. "
Ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny fihenan'ny fivoahana ara-batana dia mitarika ho amin'ny fahataran'ny fanombohana ary mihena ny fikirizana (6.7).
Heverinao ve fa nanimba ny mpandray anjara tamin'ity fanandramana ity?
Heverinao ve fa tokony nanao io fanandramana io ireo mpikaroka?
Inona no fiovana, raha misy, azonao atao ve ny manatsara ny fahasalamana etika?
Sary 6.7: Valim- Middlemist, Knowles, and Matter (1976) avy amin'ny Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Ny lehilahy izay niditra tao amin'ny efitra fandroana dia nomena ny iray tamin'ireo fepetra telo: akaiky lavitra (ny mpiara-dia iray dia napetraka tao amin'ny urine mivantana avy hatrany), ny halaviran-dalavaly (ny mpiady iray dia napetraka ny urine nesorina), na ny fifehezana (tsy misy mpiaro). Ny mpandinika iray napetraka tao amin'ny trano fidiovana iray dia nampiasa ny perisopia natsangana natsangana mba hijerena sy handamina ny fotoana sy ny faharetan'ny fanadiovana. Ireto misy hadisoana momba ny tombantombana dia tsy misy. Nampifanarahina tamin'ny Middlemist, Knowles, and Matter (1976) , ny sary 1.
[ , ] Tamin'ny volana Aogositra 2006, teo amin'ny 10 andro talohan'ny fifidianana voalohany, olona 20.000 mipetraka any Michigan no nahazo mailaka naneho ny fihetsika nifidianany sy ny fitondrantenan'ny mpifanolo-bodirindrina taminy (sary 6.8). (Araka ny resahina ato amin'ity toko ity, any Etazonia, ny fitondram-panjakana dia mitazona firaketana momba izay mifidy amin'ny fifidianana tsirairay ary azo alaina ho an'ny besinimaro ireo fampahalalam-baovao ireo.) Taratasy sasantsasany amin'ny ankapobeny dia mampitombo ny isam-pifidianana amin'ny ampahany isan-jato, saingy nitombo ny vokatra Amin'ny 8.1 isan-jato, ny vokatra goavana indrindra hita hatramin'io (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Ny vokatr'izany dia tena lehibe tokoa ny nanoloran'i Hal Malchow sora-pamoretana ara-politika an'i Donald Green $ 100,000 tsy hamoaka ny vokatry ny fanandramana (angamba i Malchow mety hampiasa io vaovao io) (Issenberg 2012, p 304) . Na izany aza, Alan Gerber, Donald Green, ary Christopher Larimer dia namoaka ity taratasy ity tamin'ny taona 2008 tao amin'ny American Political Review Review .
Rehefa mandinika amim-pitandremana ilay mailaka ianao ao amin'ny sary 6.8 dia mety ho hitanao fa tsy miseho ao ny anaran'ny mpikaroka. Ny adiresy miverina kosa dia ny Professional Consulting Consulting. Ao amin'ny fankatoavana ilay taratasy dia manazava ireo mpanoratra: "Misaotra manokana an'i Mark Grebner avy amin'ny Consulting Consulting Practical, izay nanamboatra sy nandamina ilay mailaka fandaharam-pianarana nianatra teto."
Diniho ny fampiasana an'io fitsaboana io amin'ny resaka fitsipika efatra etika voalaza ato amin'ity toko ity.
Diniho ny fitsaboana amin'ny heviny momba ny tsy fivadihana ao amin'ny fototeny.
Inona no fiovana, raha misy, azonao atao ve ny manolotra an'io fanandramana io?
Hisy fiantraikany amin'ny valinteninao amin'ireo fanontaniana etsy ambony raha toa ka efa mandefa mailaka mitovy amin'izany amin'izao fotoana izao ve i Mark Grebner? Amin'ny ankapobeny, ahoana no tokony hieritreretan'ireo mpikaroka momba ny fanombanana ny fepetra efa misy ataon'ny mpitsabo?
Alao sary an-tsaina hoe manapa-kevitra ny hanandrana hahazo ny faneken'izy ireo amin'ny alàlan'ny olona ao amin'ny vondrona fitsaboana fa tsy ireo ao amin'ny vondrona mpitantana. Inona no fiantraikan'izany fanapahan-kevitra izany eo amin'ny fahafahanao hahatakatra ny anton'ny fahasamihafana eo amin'ny taham-pifidianana eo amin'ny vondrona fitsaboana sy fanaraha-maso?
Soraty amin'ny appendice etika izay mety miseho amin'ity gazety ity rehefa nivoaka.
Sary 6.8: Mailaka avy amin'ny Gerber, Green, and Larimer (2008) . Ity mpandefa ity dia nanatsara ny tahan'ny fitomboana tamin'ny 8.1 isan-jato, ny fiantraikany lehibe indrindra izay efa nodinihan'ny mpamaky iray. Navoaka tamin'ny alalana avy amin'ny Gerber, Green, and Larimer (2008) , appendix A.
[ ] Miorina amin'ilay fanontaniana teo aloha izany. Raha vantany vao nalefa ireo mpandefa mailaka 20.000 (sary 6.8), ary 60,000 hafa tsy dia mavitrika kokoa ny mailaka, dia nisy ny fihemoran'ny mpandray anjara. Raha ny marina dia mitatitra i Issenberg (2012) (p. 198) fa "i Grebner [tale mpitantana ara-politika ara-politika] dia tsy afaka nanatontosa ny isan'ny olona nanakorontana ny telefaona, satria ny biraony novaliany haingana dia haingana be Tsy afaka namela hafatra ny mpandray anjara. "Nanazava i Grebner fa mety mbola ho lehibe kokoa ny famerenana azy ireo raha toa ka nampihena ny fitsaboana. Hoy izy tamin'i Alan Gerber, iray amin'ireo mpikaroka, "Alan raha nandany dimanjato dolara izahay ary nandrakotra ny fanjakana manontolo sy i Salman Rushdie." (Issenberg 2012, 200)
Manova ny valinteninao amin'ny fanontaniana teo aloha ve ity fampahalalana ity?
Inona avy ireo paikady handraisana fanapahan-kevitra amin'ny fisian'ny tsy fahazoana antoka fa hanome torohevitra toy izany amin'ny ho avy ianao?
[ , ] Raha ny fampiharana, ny adihevitra ara-ethika dia miseho momba ny fanadihadiana izay tsy ahitan'ny mpikaroka fa tsy neken'ny mpandray anjara marina (ohatra ireo trangana tranga telo voalaza ato amin'ity toko ity). Na izany aza, ny adihevitra ara-ethika dia mety hipoitra ihany koa amin'ny fanadihadiana izay manana fanekena marina. Manorata fandinihana ara-pihetseham-po iray izay ahafahanao mahazo fanekena marina avy amin'ireo mpandray anjara, fa izay mbola eritreretinao dia tsy mety. (Torohevitra: raha sahirana ianao dia azonao atao ny manandrana mamaky an'i Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)
[ , ] Matetika ny mpikaroka dia miezaka mafy mamaritra ny fomba fisainany ety sy amin'ny olon-drehetra. Taorian 'ny nahafantarana fa navotsotra indray ny Tastes, Ties, ary Time, Jason Kauffman, mpitarika ny ekipa mpikaroka, dia naneho fanehoan-kevitra vitsivitsy momba ny fitsipiky ny tetikasa. Vakio ny Zimmer (2010) ary avereno an-tsoratra ny fanamarihan'i Kauffman amin'ny fampiasana ireo fitsipika sy rafitra etika izay voalaza ato amin'ity toko ity.
[ ] Banksy dia iray amin'ireo artista malaza amin'izao fotoana izao ao Royaume-Uni ary fantatra amin'ny graffiti an-dalam-pandrosoana ara-politika (sary 6.9). Ny maha-izy azy anefa, dia zava-miafina. Banksy dia manana tranonkala manokana, i Banksy mba hahafahany mamantatra ny maha-izy azy raha toa ka tiany, saingy tsy nisafidy izy. Tamin'ny 2008, ny gazety Daily Mail dia namoaka lahatsoratra iray mitaky ny hamantarana ny tena anaran'i Banksy. Avy eo, tamin'ny 2016, i Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo sy Steven C. Le Comber (2016) nanandrana nanamarina ity fanambarana ity tamin'ny fampiasana ny modelin'i Dirichlet momba ny famolavolana drafitra. Raha ny tena marina, nanangona ny toerana ara-jeografikan'ny graffiti public ny Banky any Bristol sy Londres. Avy eo, tamin'ny fikarohana ireo lahatsoratra an-gazety an-tsoratra sy ny firaketana an-tsoratra momba ny fifidianana, dia nahita adiresy teo aloha an'ny olona tsirairay, ny vadiny, ary ny ekipa baolina kitra (izany hoe baolina kitra). Ny mpanoratra dia mamintina ny fitadiavana ny taratasiny toy izao:
"Tsy misy sahy manadihady, fa tsy sarotra ny manadihady momba ny maha-olona an'i Banksy, miorina amin'ny fanadihadiana napetraka eto, fa tsy ny filazana ny tendron'ny geoprofiles any Bristol sy Londres dia ahitana adiresy fantatra amin'ny anarana mifandraika amin'izany miaraka amin'ny anarana nomena anarana. "
Taorian'ny Metcalf and Crawford (2016) , izay mihevitra ity raharaha ity amin'ny antsipiriany bebe kokoa, dia nanapa-kevitra ny tsy hampiditra ny anaran'ny olona rehefa miresaka ity fianarana ity.
Diniho ity fianarana ity amin'ny fampiasana ireo fitsipika sy fitsipika etika ato amin'ity toko ity.
Efa nanao an'ity fianarana ity ve ianao?
Ireo mpanoratra dia manamarina ity fandinihana ity amin'ny famintinana ny taratasiny miaraka amin'ity fehezan-teny manaraka ity: "Maro kokoa ny vokatra azo, manohana ireo soso-kevitra teo aloha fa azo ampiasaina ny fandalinana ireo asa fampihorohoroana amin'ny ankamaroan'ny asa fampihorohoroana (ohatra graffiti) mba hanampiana ny toeram-pitsaboana hampihorohoro mitranga ny zava-nitranga, ary manome ohatra mahavariana momba ny fampiharana ilay modely amin'ny olana sarotra sy misy eo amin'ny tontolo izao. "Manova izany ve ny hevitrao momba ilay taratasy? Raha eny, ahoana?
Ny mpanoratra dia nampiditra ireto fanamarihana ara-etika manaraka ireto any amin'ny faran'ny taratasy: "Fantatry ny mpanoratra, sy ny fanajana, ny tsiambaratelon'ny anarana [nomerao anarana] ary ny havany, ary dia nampiasa solonanarana fotsiny tao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Tsy nanaiky adiresy mazava izahay. "Moa ve izany manova ny hevitrao momba ilay taratasy? Raha eny, ahoana? Heverinao ve fa misy dikany ny dichotomy ho an'ny daholobe / tsy miankina amin'io tranga io?
Sary 6.9: Sarin'ny Spy Booth nataon'i Banksy ao Cheltenham, Angleterre an'i Kathryn Yengel, 2014. Loharano: Kathryn Yengel / Flickr .
[ ] Metcalf (2016) no manamarina fa "ny tahiry ampahibemaso misy tahiry manokana dia anisan'ny mahaliana indrindra ho an'ireo mpikaroka ary tena mampidi-doza ho an'ny lohahevitra."
Inona avy ireo ohatra azo itokisana izay manohana ity filazana ity?
Anatin'ity lahatsoratra ity, nilaza ihany koa i Metcalf fa ny anachronista dia mihevitra fa "ny fampahalalam-baovao rehetra dia efa nataonà famoaham-baovaon'olon-tsotra iray." Omeo ohatra iray ny amin'izay mety hitranga.
[ , ] Amin'ity toko ity, nanolotra fitsipika ankapobeny aho fa ny angona rehetra dia mety ho azo fantarina ary ny angon-drakitra rehetra dia azo tsapain-tanana. Ny tabilao 6.5 dia manome lisitry ny tahirin-kevitra momba ny angon-drakitra izay tsy voamariky ny tsirairay fa misy ny fampahalalana manokana saingy mbola misy ifandraisany amin'ny olona manokana.
Tadiavo ny roa amin'ireto ohatra ireto ary ambarao ny fomba fiasa mitovitovy amin'ny fanafihana mitam-piadiana amin'ny tranga roa.
Ho an'ny tsirairay amin'ireo ohatra roa amin'ny ampahany (a), dia farito ny fomba ahafahan'ny angon-drakitra manazava vaovao mahaliana momba ny olona ao amin'ny daty.
Mifidiana daty fahatelo avy eo amin'ny latabatra. Manorata mailaka amin'ny olona mandinika ny famotsorana azy. Hazavao aminy ny fomba ahafahan'ity tahirin-kevitra ity ho azo fantarina sy azo tsapain-tanana.
Tabilao 6.5: Ohatra momba ny Sosialy sosialy izay tsy manam-paharoa amin'ny famaritana manokana ny fampahalalam-baovao fa afaka mifandray amin'ny olona manokana
Fikarohana momba ny fiantohana ara-pahasalamana Sweeney (2002)
Fampahalalana momba ny varotra karatra Montjoye et al. (2015)
Ny tahiry momba ny filma Netflix Narayanan and Shmatikov (2008)
Antso ny meta-data Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
Hikaroka data amin'ny rakitra Barbaro and Zeller (2006)
Tatitra ara-demôkratika, fitantanana ary sosialy momba ny mpianatra Zimmer (2010)
[ ] Ny fanolokoloanao ny kiraro tsirairay dia ahitana ny mpandray anjara sy ny olon-drehetra, fa tsy ny namanao fotsiny. Ity fahasamihafana ity dia aseho amin'ny tranga momba ny Hopitaly Krizin'ny Jirama (Katz, Capron, and Glass 1972, chap. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .
Dr. Chester M. Southam dia dokotera sy mpikaroka ao amin'ny Sloan-Kettering Institute for Cancer Research ary profesora iray momba ny fitsaboana ao amin'ny Cornell University Medical College. Ny 16 Jolay 1963, dia nanisy tsimokaretina homamiadana i Southam sy ny mpiara-miasa anankiroa tao anatin'ireo faty marary 22 marobe tao amin'ny Hopitaly Krizin'ny Jiro Krizinina any New York. Ireo fikarohana ireo dia anisan'ny fikarohana nataon'i Southam mba hahatakarana ny rafitra fiarovana ny homamiadana. Tamin'ny fikarohana natao vao haingana, i Southam dia nahita fa ireo mpiasa an-tsitrapo salama dia afaka nandà ny ati-doha homamiadana tao anatin'ny enina herinandro ka hatramin'ny enina herinandro, fa ny marary izay efa ela dia efa voan'ny kansera. Nanontany tena i Southam raha toa ny valin'ny fahataran'ny kanseran'ny kansera noho izy ireo voan'ny homamiadana na noho ny maha-be taona azy ireo ary efa niharatsy. Mba hamahana ireo fahafaha-manao ireo dia nanapa-kevitra i Southam fa hampiditra ireo sela live ao amin'ny vondron'olona efa zokiolona sy maratra nefa tsy nanana homamiadana. Rehefa niparitaka ny tenim-pahaizana, dia nisy ny fametraham-pialan'ny dokotera telo nangatahina mba handray anjara, ny sasany dia nanao fampitahana tamin'ny fanadihadiana tao amin'ny toby fitanan'i Nazi, fa ny hafa kosa niorina tamin'ny fanomezan-toky nataon'i Southam dia nahita ny fikarohana tsy nahomby. Farany, ny Fitsipika Reganin'i New York dia nanadihady ny tranga raha te hanapa-kevitra raha afaka mampihatra fanafody i Southam. Southam dia niady hevitra momba ny fiarovany fa miasa amin'ny "fomba amam-panao tsara indrindra amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana" izy. Ny fiarovan-tenany dia mifototra amin'ny fanambarana maro, izay notohanan'ny manam-pahaizana manokana nanatri-maso azy ireo: 1) ny fikarohana nataony ny fahamendrehan'ny siansa sy sosialy avo lenta; (2) tsy nisy ny loza mety hitranga amin'ny mpandray anjara; fanambarana iray miorina amin'ny ampahan-taonan'i Southam tamin'ny faha-10 taona niainana niaraka tamin'ny lohahevitra mihoatra ny 600; (3) tokony hampifanaraka ny tahan'ny fampahafantarana araka ny lanjan'ny risika arahin'ny mpikaroka; (4) ny fikarohana dia nifanaraka tamin'ny fitsipiky ny fomba fitsaboana tamin'izany fotoana izany. Farany, ny birao an'ny Regent dia nahita an'i Southam ho meloka amin'ny hosoka, fitaka, ary fitondran-tena tsy mendrika, ary nampiato ny fahazoan-dàlany ara-pahasalamana nandritra ny herintaona. Taona vitsy taty aoriana anefa, i Southam dia voafidy ho filohan'ny Fikambanan'ny Mpikaroka Momba ny Kansera.
Fandalinana ny fandinihan'i Southam amin'ny fampiasana ireo fitsipika efatra ato amin'ity toko ity.
Tahaka ny hoe nalain'i Southam ny fomba fijerin'ny mpiara-miasa aminy ary nantenain'izy ireo ny fomba mety hamaliana ny asany; Raha ny marina, maro tamin'izy ireo no nijoro ho vavolombelona momba azy. Saingy tsy nahavita na tsy nety izy ny hahatakatra ny mety hitrangan'ny fikarohana ataony amin'ny vahoaka. Inona avy ny anjara asan'ny fiheveran'ny olona-izay mety ho samy hafa amin'ny hevitry ny mpandray anjara na ny mpiara-mianatra aminy - tokony hanana etika fikarohana? Inona no tokony hitranga raha tsy mitovy ny hevitry ny olona sy ny hevitry ny olona?
[ ] Ao anatinà lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe "Fivarotana maro any Congo atsinanana: fampiasana finday handrafetana ny zava-mitranga amin'ny fotoana tsy ampoizina", Van der Windt sy Humphreys (2016) mamaritra ny rafitra fanangonana tahiry (jereo ny toko 5) izay noforoniny tany Congo Atsinanana. Tantarao ny fomba nandraisan'ny mpikaroka ny tsy fahazoana antoka ny mety ho tohin'ny mpandray anjara.
[ ] Tamin'ny oktobra 2014, mpikaroka ara-politika telo no nandefa mailaka tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana 102.780 tany Montana-eo ho eo ny 15% -n'ny mpifidy voasoratra anarana ao amin'ny fanjakana (Willis 2014) -na ampahany amin'ny fanandramana mba handrefesana raha toa ka hifidy kokoa ny mpifidy nomena fampahalalana bebe kokoa . Ny mpandefitra - izay nantsoina hoe "Guide to 2014 General Election Guide for Elections 2014" - no niorina tamin'ny Fitsarana Ambony tao amin'ny Fitsarana Ambony tao amin'ny Fitsarana Montana, izay tsy fifidianana solombavambahoaka, tao amin'ny ambaratonga malalaka ho an'ny mpandala ny nentin-drazana, izay ahitana an'i Barack Obama sy Mitt Romney ho fampitahana. Ny mailaka koa dia nahitana ny fametahana ny Tombo-kavin'ny Fanjakana Montana (6.10).
Nandefa fitarainana avy amin'ireo mpifidy tao Montana ny mailaka, ary nahatonga an'i Linda McCulloch, Sekreteram-panjakana ao Montana, hametraka fitarainana ara-dalàna amin'ny governemantan'i Montana. Ireo oniversite nampiasa ireo mpikaroka-Dartmouth sy Stanford-dia nandefa taratasy ho an'ny olona rehetra nahazo ilay mailaka, niala tsiny noho ny mety ho fisafotofotoana ary nanazava fa ny mpandefitra dia "tsy nifanerasera tamin'ny antoko politika, kandidà na fikambanana, ary tsy natao mba hamelezana ny hazakazaka rehetra. "Ny taratasy dia nanazava ihany koa fa ny laharana" dia miankina amin'ny fampahafantarana ampahibemaso momba izay nomena ny tsirairay tamin'ireo hetsika "(sary 6.11).
Ny volana May 2015, ny Kaomisionan'ny Fomba Politika any Montana, Jonathan Motl, dia nanapa-kevitra fa nanitsakitsaka ny lalàn'i Montana ireo mpikaroka: "Ny mpikarakara dia mamaritra fa misy ny zava-misy marina hanehoana fa i Stanford, Dartmouth ary / na ireo mpikaroka dia manitsakitsaka ny fampielezan-kevitr'i Montana lalàna fampiharana mitaky ny fisoratana anarana, fanaovana tatitra ary famoahana ny fandaniana tsy miankina "(Ampitahao ny laharana faha-3 ao amin'ny Motl (2015) ). Ny komity dia nanoro hevitra ihany koa fa ny Mpisolovava ao amin'ny County dia manadihady raha toa ka manitsakitsaka ny lalàna momba ny fanjakana ao Montana (Motl 2015) ny fampiasana tsy ara-dalàna ny Great Seal of Montana.
Tsy nanaiky ny didin'i Motl i Stanford sy Dartmouth. Nilaza ny mpitondra tenin'ny Stanford antsoina hoe Lisa Lapin fa "Stanford ... tsy mino ny lalàna mifehy ny fifidianana natao" ary ny mailaka dia "tsy misy fiarovana amin'ny fanohanana na fanoherana izay mety ho kandida". Nolazainy fa ilay mailaka dia nilaza mazava fa " tsy manohana kandida na antoko " (Richman 2015) .
Diniho ity fianarana ity amin'ny fampiasana ireo fitsipika efatra sy ireo rafitra roa voalaza ato amin'ity toko ity.
Raha heverina fa nalefa tany amin'ny samirery mpifidy (fa amin'ity indray mitoraka ity amin'ny fotoana iray) ireo mailaka ireo, amin'ny fepetra hafa inona no mety hanovan'ity mailaka ity ny vokatry ny fifidianana ny Fitsarana Tampony?
Raha ny marina, tsy nalefa any amin'ny samirery mpifidy ny mailaka. Araka ny tatitra nataon'i Jeremy Johnson (mpahay siansa iray nanampy tamin'ny fanadihadiana), dia nalefa tamin'ireo mpifidy 64.265 izay azo heverina ho malalaka amin'ny fitobiam-pirahalahiana miditra any amin'ny faritry ny demokraty demokraty ary mpifaninana 39.515 fantatra ho mpandala ny nentin-drazana ho ivon'ny Repoblika. Ireo mpikaroka dia nanamarina ny tsy fitoviana eo amin'ny isa an'ny Demokratika sy ny Repoblikana noho ny fiheveran'izy ireo fa ambany noho ny mpifidy Demokraty ny fiakaran'ny vidim-pifidianana. "Manova izany ve ny fanombanana ny fikarohana? Raha eny, ahoana?
Ho setrin'ny fanadihadiana, nilaza ireo mpikaroka fa noraisin'izy ireo ity fifidianana ity satria "tsy nisy fifanolanana ara-pitsarana teo amin'ny ankolafy voalohany. Raha jerena amin'ny fanadihadiana ny valim-pifidianana voalohan'ny taona 2014 tao anatin'ny tontolon'ny fifidianana monisipaly an'i Montana teo aloha, dia nanapa-kevitra ireo mpikaroka fa tsy hanova ny vokatr'io fifaninanana io ny fikarohana. " (Motl 2015) . Manova ny fijerinao ny fikarohana ve izany? Raha eny, ahoana?
Raha ny marina, ny fifidianana dia tsy dia akaiky loatra (latabatra 6.6). Manova ny fijerinao ny fikarohana ve izany? Raha eny, ahoana?
Hita fa nisy fanadihadiana natao tamin'ny iray tamin'ireo mpikaroka tao amin'ny Dartmouth IRB, saingy samy hafa tamin'ny antsipiriany ny fianarana an'i Montana. Ny mailaka nampiasaina tany Montana dia tsy natolotra mihitsy tao amin'ny IRB. Tsy noraisina tamin'ny Stanford IRB ny fianarana. Manova ny fijerinao ny fikarohana ve izany? Raha eny, ahoana?
Hita ihany koa fa ireo mpikaroka dia nandefa fitaovana toy izany ho mpifidy 143.000 tany Kalifornia ary 66.000 tao New Hampshire. Raha mbola fantatro dia tsy nisy fitarainana ofisialy naterak'ireo mpandefa mailaka mihoatra ny 200.000 ireo. Manova ny fijerinao ny fikarohana ve izany? Raha eny, ahoana?
Inona, raha misy ianao, mety ve ny nataonao raha ianao no tena naman'ny Fiangonana? Ahoana no fomba nanaovanao ny fianarana raha liana ianao amin'ny fijerena raha toa ka mampitombo ny fampahalalam-baovao misimisy kokoa amin'ny fiara tsy matihanina?
Tabilao 6.6: Valim-pifidianana avy amin'ny Fitsarana Avo momba ny Fitsarana Avon'ny Montana 2014 (loharano: tranonkalan'ny State Secretary of Montana)
Ny fitsarana rariny laharana # 1
Ny fitsarana rariny laharana # 2
Sary 6.10: Mailer nalefan'ny mpikaroka ara-politika telo tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana 102.780 tany Montana ho ampahany amin'ny fanandramana mba handrefesana raha toa ka hifidy kokoa ny mpifidy nomena bebe kokoa. Ny haben'ny santionany tamin'ity fanandramana ity dia teo amin'ny 15% tamin'ireo mpifidy mahaleotena tao amin'ny fanjakana (Willis 2014) . Motl (2015) tamin'ny Motl (2015) .
Sary 6.11: taratasy fialan-tsiny nalefa tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana 102.780 tany Montana izay nahazo ilay mailaka aseho amin'ny 6.10. Ny taratasy dia nalefan'ny Filohan'ny Dartmouth sy Stanford, ireo oniversite nampiasa ireo mpikaroka nalefa ny mailaka. Motl (2015) tamin'ny Motl (2015) .
[ ] Tamin'ny 8 May 2016, mpikaroka roa-Emil Kirkegaard sy Julius Bjerrekaer no nanaparitaka ny vaovao avy amin'ny tranonkalan'ny OkCupid amin'ny aterineto ary namoaka ampaham-batana manodidina ny 70 000 mpampiasa, anisan'izany ny anarana, ny taona, ny lahy sy ny vavy, ny toerana, ny hevitry ny fivavahana , fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny astrology, ny fahalianana mampiaraka, ny isan'ny sary, sns., ary koa ny valiny nomena ny fanontaniana 2.600 ambony ao amin'ilay tranonkala. Ao anatina taratasy fanoratana miaraka amin'ny angon-drakitra navoaka, nanambara ireo mpanoratra fa "ny sasany dia mety manohitra ny fitsipika momba ny fanangonana sy ny famoahana ireo angona ireo. Na izany aza, ny angon-drakitra rehetra hita tao amin'ny daty na dia efa misy na dia efa misy aza ny famoahana azy, noho izany dia manolotra azy io amin'ny endrika mahasoa kokoa io famoahana io. "
Ho setrin'ny famoahana angon-drakitra, nanontany ny mpanoratra iray tao amin'ny Twitter hoe: "Io daty io dia manavaka indray. Na dia ny anaran'ny mpampiasa ihany aza? Nisy asa natao ve natao hanafenana izany? "Ny valinteniny dia hoe" Tsia. Efa ampahibemaso ny data. " (Zimmer 2016; Resnick 2016) .
Manombana ny famoahana ireo angon-drakitra ireo amin'ny fampiasana ireo fitsipika sy rafitra etika voaresaka ato amin'ity toko ity.
Hampiasa ireto angona ireto ve ianao amin'ny fikarohana ataonao?
Ahoana raha mametaka azy ireo ianao?
[ ] Tamin'ny 2010, mpanadihady momba ny faharanitan-tsaina niaraka tamin'ny Tafika Amerikanina dia nanome telegrama diplomatika miisa 250.000 ho an'ny orinasa WikiLeaks, ary nalefa an-tserasera an-tserasera. Gill and Spirling (2015) milaza fa "ny fampahalalam-baovao WikiLeaks dia mety manondro ny trangan'ny angon-drakitra izay mety hipoitra amin'ny fanandramana tsikombakomba amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena" ary avy eo dia mamaritra ny sasantsasany amin'ny tahirin-tsokosoko. Ohatra, ireo mpanoratra dia manombatombana fa manondro ny 5% amin'ny telegrama diplomatika mandritra io fotoana io, saingy miovaova izany ny ambasady amin'ny masoivoho (jereo ny sary 1 amin'ny taratasy).
Vakio ny taratasy, ary soraty amin'ny appendice etika izany.
Ny mpanoratra dia tsy nandinika ny votoatin'ny tahirin-tsakafo. Misy tetikasa mampiasa ireo telegrama izay hitondranao azy? Misy tetikasa mampiasa ireo telegrama izay tsy hitondranao?
[ ] Mba hianarana ny fomba fitakian'ny orinasa ny fitarainana dia nandefa taratasy fitarainana sandoka ny mpikaroka iray any amin'ireo toeram-pisakafoanana 240 any New York City. Ity misy singa iray avy amin'ny litera foiby.
"Manoratra ity taratasy ity aminao aho satria tezitra amin'ny zava-nitranga iray vao haingana teo amin'ny trano fisakafoanao aho. Tsy ela dia nankalaza ny tsingerintaona voalohany nataonay izahay mivady. ... Nanjary narary ny hariva rehefa nanomboka niseho ny soritr'aretina ora efatra taorian'ny sakafo. Ny fihinanan-kanina, ny biriky, ny aretim-pivalanana, ary ny tsinay dia manondro zavatra iray: poizina amin'ny sakafo. Mampihetsi-po ahy ny mieritreritra fa ny takarivan'ny mariazinay manokana dia nanjary nihena ho an'ny vadiko nijery ahy teo amin'ny toerana fetalina tao amin'ny gorodon'ny efitra fatorianay, teo anelanelan'ny hatsiaka. ... Na dia tsy ezahiko ny hametraka tatitra amin'ny Better Business Bureau na ny Departemantan'ny Fahasalamana, dia tiako ianao, [anaran'ny mpamatsy sakafo], mba hahatakatra ny zavatra nataoko nandritra ny androm-pandresena fa hamaly araka izany. "
Amboary ity fianarana ity amin'ny fampiasana ireo fitsipika sy fitsipika etika voalaza ato amin'ity toko ity. Noho ny fanombantombanana nataonao, azonao atao ve ilay fianarana?
Toy izao ny fihetsika nataon'ireo trano fisakafoanana nahazo ilay taratasy (Kifner 2001) : " (Kifner 2001) tsakafo no nahatonga ny tompona, ny mpitantana sy ny chef nikaroka tamin'ny alàlan'ny ordinatera ho an'ny famandrihana anarana [na fanoratana anarana nomena anarana] na ireo karatry ny carte de crédit, ny fanavaozana ny menus ary ny famoahana ireo sakafo mety hohanina, ary nanontany ireo mpiasan'ny lakozia momba ny mety hitranga mety ho azy ireo, izay namporisihany ny fianjeran'ny orinasa sy ny profesora amin'izao fotoana izao, dia ny fianarana any amin'ny helo any an-tsekoly. "Manova ny fanadihadihana ve ity vaovao ity?
Raha mbola fantatro dia tsy nodinihan'ny IRB na ny antoko fahatelo io fandinihana io. Manova izany ve ny fanombanana ny fianarana? Nahoana?
[ ] Miorina amin'ny fanontaniana teo aloha, tiako ny hampitahao ity fianarana ity miaraka amin'ny fianarana samihafa izay misy koa fisakafoanana. Tao amin'io fianarana hafa io, dia nandefa mpianatra roa lahy sy vavy roa i Newark sy ireo mpiara-miasa (1996) miaraka amin'ny famerenana an-tsoratra ny fangatahana asa ho mpividy sy mpanam-bola ao amin'ny trano fisakafoanana 65 ao Philadelphia, mba hanadihadiana ny fanavakavahana ara-pananahana ao an-trano fandraisam-bahiny. Ireo fampiharana 130 dia nitarika tamina resadresaka 54 ary tolotra asa 39. Ny fandinihana dia nahita porofo manamarina ny fanavakavahana ara-nofo amin'ny vehivavy ao amin'ny trano fisakafoanana avo lenta.
Soraty ny appendice etika amin'ny fianarana.
Heverinao ve fa io fandalinana io dia hafa amin'ny fahasamihafan'ny zavatra voalaza ao amin'ilay fanontaniana teo aloha. Raha eny, ahoana?
[ , ] Fotoana nanodidina ny taona 2010, mpandray anjara 6 548 any Etazonia no nahazo mailaka mitovy amin'io.
Manoratra aminao aho satria dokotera mety ho dokotera. mpianatra manana tombontsoa lehibe amin'ny fikarohanao. Ny drafiko dia ny hampihatra amin'ny Ph.D. ny fandaharam-potoana hianjera, ary maniry mafy ny hianatra betsaka araka izay azoko atao mikasika ny fahafaha-manao fikarohana mandritra ny fotoana fohy.
Ho any am-pianarana aho androany, ary na dia fantatro aza fa fohy ny fanamarihana, nanontany tena aho raha mety manana 10 minitra raha toa ka vonona ny hihaona amiko ianao mba hiresaka fohifohy momba ny asanao sy ny fahafahana mety hahafahako mandray anjara amin'ny ny fikarohana ataonao. Ny fotoana mety hahasoa anao dia ho tsara amiko, satria ny fihaonana aminareo no laharam-pahamehana voalohany mandritra ity fitsidihana ity.
Misaotra mialoha mialoha ny fandinihanao.
Amin'ny fomba feno fankasitrahana, Carlos Lopez "
Ireo mailaka ireo dia hosoka; (nitranga in-1): Nandritra ny fanadihadiana dia nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra. ary ny lehilahy (Carlos Lopez, Meredith Roberts, Raj Singh, sns). Hitan'ny mpikaroka fa rehefa nihaona nandritra ny herinandro ny fangatahana, dia nomena fahafahana miditra amin'ny mpandray anjara 25% isaky ny vehivavy ny lehilahy Kaokaziana noho ny vehivavy sy ny vitsy an'isa. Saingy rehefa nangataka fivoriana tamin'io andro io ireo mpianatra nilahatra dia nailika tanteraka (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .
Diniho ity fanandramana ity araka ny fitsipika sy ny rafitra ato amin'ity toko ity.
Taorian'ny fianarana dia nalefan'ireo mpikaroka ity mailaka fanararaotana ity ho an'ny mpandray anjara rehetra.
"Vao haingana, naharay mailaka avy amin'ny mpianatra iray nangataka ny 10 minitra amin'ny fotoananao hifanakalozana ny Ph.D. fandaharana (ny vatan'ny mailaka miseho etsy ambany). Mandefa mailaka aminareo izahay androany mba hanodinkodina anareo amin'ny tanjon'ity mailaka ity, satria anisan'ny fandalinana fikarohana izany. Manantena izahay fa ny fianarantsika dia tsy nahatonga fanakorontanana taminareo ary miala tsiny izahay raha toa ka tsy afa-misaraka ianareo. Ny fanantenanay dia ity taratasy ity dia hanome fanazavana ampy momba ny tanjona sy ny famolavolana ny fianarantsika mba hanamaivanana ireo olana rehetra mety ho hitanao mikasika ny fandraisanao anjara. Tianay ny misaotra anao amin'ny fotoananao ary mamaky bebe kokoa raha tianao ny hahafantatra ny antony naharanao ity hafatra ity. Manantena izahay fa ho hitanao ny hasarobidin'ny fahalalana izay eritreretinao hamolavola an'ity fianarana fianarana ambony ity. "
Taorian'ny nanazavany ny tanjona sy ny famolavolana ny fianarana, dia nanamarika izy ireo fa:
"Raha vao vita ny valin'ny fikarohana nataonay, dia hametraka azy ireo amin'ny tranokalanay izahay. Azafady, matokia fa tsy hisy angon-drakitra azo alaina avy amin'io fianarana io, ary ny fifaneraserana eo amin'ny foto-kevitra dia ahafahantsika mamantatra ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba ny fitambaran-kitona fa tsy amin'ny ambaratonga samihafa. Tsy misy olona na oniversite ho fantatra amin'ny iray amin'ireo fikarohana na angona navoakanay. Mazava ho azy, ny valiny tsirairay avy amin'ny mailaka tsirairay dia tsy misy dikany satria misy antony maro mahatonga ny mpikambana iray manana ny maha-mpikambana hanaiky na handà fangatahana fihaonana. Tsy fantatra ny rakitra rehetra ary efa voavaha tao amin'ny rakitra sy ny serivily mifandraika ireo valinteny mailaka fantatra. Ankoatr'izay, nandritra ny fotoana nahafantarana ny angona, dia voaro amin'ny tenimiafina matanjaka sy azo antoka. Ary toy ny toe-javatra mitranga mandrakariva ny fikarohana siantifika momba ny olan'ny olombelona, ​​ny fanadihadiana fikarohana dia nankatoavin'ny Institutional Review Boards ho an'ny oniversite (Columbia University Morningside IRB sy ny University of Pennsylvania IRB).
Raha manana fanontaniana momba ny zonao ianao amin'ny resaka fikarohana, dia azonao atao ny manontany amin'ny Biraom-panadihadiana ao amin'ny Oniversiten'i Columbia amin'ny alàlan'ny [fanovana] na amin'ny alàlan'ny mailaka ao amin'ny [fanovana] ary / na ny federaly momba ny Institutional Review ao amin'ny University of Pennsylvania.
Misaotra anareo indray amin'ny fotoananao sy ny fahatakaranao ny asa ataonay. "
Inona ireo fanoherana momba ny famoahana an'ity raharaha ity? Inona avy ireo fanoherana? Heverinao ve fa ireo mpikaroka dia tokony handratra ny mpandray anjara amin'io tranga io?
Ao amin'ny fitaovana an-tserasera an-tserasera, ireo mpikaroka dia manana fizarana mitondra ny lohateny hoe "Proteinina Manokana." Vakio ity fizarana ity. Misy zavatra azonao ampiana na nesorina ve?
Inona no vidin'ny fanandramana natao tamin'ireo mpikaroka? Inona no vidin'ny fanandramana natao tamin'ireo mpandray anjara? Andrew Gelman (2010) dia nanamafy fa ireo mpandray anjara tamin'ity fianarana ity dia mety nahazo valisoa noho ny vanim-potoana taorian'ny nahatanterahan'ny fanandramana. Manaiky izany ve ianao? Andramo ny fampiasanao ny hevitrao amin'ny fampiasana ireo fitsipika sy fitsipika etika ao amin'ity toko ity.